Ukupakisha kunye neLogistic - iPandawill Technology Co, Ltd.
EPandawill, zonke iibhodi ziya kutywinwa zicace, ezingxoweni ezingenanto ngaphandle kokubeka imixholo nakuphi na ukubushushu obungaphaya, kwaye ngendlela apho ukupakisha kunokuthi kuvulwe ngaphandle kobunzima emzimbeni kwiiphaneli ngaphakathi.
Zininzi izibonelelo zale ndlela yokupakisha:
✓Ukupakishwa kuyacaca ngekristale kwaye ke kuyenzeka ukuba uhlolisise okanye ujonge ibhodi ngokweenkcukacha ngaphandle kokuyikroba iphakheji kwaye ubeke iibhodi ukuba ziqhubeke nokuphatha okanye ukubhenca ukungcola nokufuma.
✓Iingxowa zinokuvulwa ngokulula ngesikere okanye ngebhleyidi kunokuba ikrazulwe, kwaye nje ukuba kuqhekezwe i-vacuum, ukupakisha kuya kukhululeka kwaye iibhodi zinokususwa ngaphandle komngcipheko wokuchithwa okanye ukonakala.
✓Iingxowa eziqukethe iiphaneli zinokuphinda zisetyenziselwe ukutywina inani lezixa, oko ke kukwandisa ixesha lokugcina kwezinto ezikhoyo.
✓Le ndlela yokupakisha ayifuni bubushushu njengoko iibhegi zitywinwa zitywinwe kwaye ke iibhodi azifakwanga kwinkqubo ye-thermal engeyomfuneko.
✓Ngokuhambelana nokuzibophelela kwethu kwindalo esingqongileyo kwe-ISO14001, ukupakishwa kunokusetyenziswa kwakhona, kubuyiselwe okanye kubuyiselwe i-100%.
Zininzi izinto onokukhetha ukuzithumela zixhomekeke kwiindleko, ixesha kunye nevolumu.
Ngokubonisa: Njengomthumeli ngaphandle omkhulu, simisele ubudlelwane obuhle kunye neenkampani ezichazayo. Oku ikakhulu kwevolumu encinci, ixesha elibalulekileyo kwiimveliso. Ngaphandle kweakhawunti yethu yokuthumela, sinokuyithumela ngeakhawunti yakho.
Ngomoya kuqoqosho xa kuthelekiswa nokubonisa kwaye kuyakhawuleza kunolwandle. Ngokwesiqhelo kwimveliso yevolumu ephakathi.
Ngokwesiqhelo kwimveliso yevolumu enkulu kunye nexesha lokukhokela alikho ngokungxamisekileyo. Kwaye yeyona ndlela isebenzayo yokuhambisa.